SAWIRO:- Doorashada kuraas kamid ah Golaha Shacabka oo ka bilaabatay Dhuusamareeb - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka SAWIRO:- Doorashada kuraas kamid ah Golaha Shacabka oo ka bilaabatay Dhuusamareeb
SAWIRO:- Doorashada kuraas kamid ah Golaha Shacabka oo ka bilaabatay Dhuusamareeb
Magaalada Dhuusamareeb waxaa goordhow ka bilaabatey doorashada laba kamid ah kuraasta Golaha Shacabka.
Kursiga kowaad ee doorashada lagu bilaabay ayaa ah Hop-067 oo ay kuwada tartamayaan Musharaxiinta kala ah.
1-Cabdiraxman Axmed Cumar (cabdi barre)
2)Murashax Cismaan Xassan (Ow-gaab)
3)Yaasiin fareey Cabdullaahi Maxamuud
4)generale cali Caraaye Cosoble (Gacmadulle)
5)Maxamed Cali Culusoow
Kursigan ayaa loo badinayaa in uu kusoo baxo Yaasiin fareey, iyada oo cabasho farabadan ay weli kajirto.
Kursiga labaad ee isla Maanta lagu dooranayo Magaalada Dhuusamareeb oo ah HOP#43 ayay ku tartamayaan Xuseen Iidoow iyo musharax uu isaga wato, iyada oo la filayo in uu ku guuleysto Xuseen Iidow kursigaas Afartii sano ee la soo dhaafay ku fadhiyay.
Previous articleBooliska oo shaaciyay khasaaraha qaraxa ka dhacay Muqdisho
Next articleMaamulka Iskuulka Mucaasir oo faah faahiyay khasaaraha kasoo gaaray qaraxa